China yokwakheka orbital ipleyiti mveliso kunye nabenzi | IShuangyang
Uyilo olukhethekileyo loxinzelelo kunye nokwakhiwa kwakhona kwe-orbit, ukubuyisela imeko yesiqhelo yamehlo kunye nokusebenza.
Izinto: titanium emsulwa yonyango
• ngokwe-anatomy yomgangatho we-orbital kunye nolwakhiwo lwe-orbital wall uyilo, uthintele ngokufanelekileyo umngxunya we-optic kunye nezinye izakhiwo ezibalulekileyo
• i-anatomy, uyilo olucekeceke, kangangoko kunokwenzeka ukunciphisa umthwalo we ukubumba, ukubuyisela ngokukuko ukuqhubekeka kwethambo lomzimba, kugcina ixesha ukusebenza, ukunciphisa trauma yotyando, ngaphantsi postoperative iingxaki.
• udonga olusezantsi lwe-orbital lucekeceke njengephepha, ke, gcina indawo enzima ngasemva komgangatho we-orbital titanium mesh. Nceda usete izihlunu zebhola wamehlo kunye namafutha, ubuyisele umthamo we-orbital cavity kunye nokuhamba kwamehlo, ukuphucula ukuxhaswa kwamehlo kunye nediplopia.
screw1.5mm iqhosha lemenyu self-kusombiwa
umnqamlezo intloko Screw umqhubi: SW0.5 * 2.8 * 75 / 95mm
Kwi-anatomy, i-orbit sisiseko okanye isokethi yokakayi apho ikhoyo iliso kunye nezihlomelo zayo. "I-Orbit" inokubhekisa kwisokethi yamathambo. Umthamo we-obbit kubantu abadala zii-30 milliliters, iliso lihlala kwi-6.5 ml iyonke. Umxholo we-orbital uquka iliso, i-orbital kunye ne-retrobulbar fascia, imisipha engaphezulu, imithambo yegazi, imithambo yegazi, amafutha, i-lacrimal gland kunye ne-sac kunye ne-duct, iinkophe, i-palal ye-palpebral ligaments, jonga i-ligaments, i-ligament ye-suspensory, septum , i-ciliary ganglion kunye ne-ciliary nerves emfutshane.
Iindlela ezijikelezayo zinemilo ecekeceke okanye imingxuma enamacala amane epiramidi, zivuleke emgceni wobuso kwaye zikhombe entlokweni. Isiseko, isiqulatho kunye neendonga ezine zenza i-orbit nganye.
Iindonga ze-Bony ze-orbital canal ebantwini yimizobo yezinto ezisixhenxe ezahlukileyo embryologically, ezibandakanya ithambo le-zygomatic kamva, ithambo le-sphenoid, elinamaphiko amancinci enza i-optic canal kunye nephiko layo elikhulu elenza icandelo elingasemva lenkqubo ye-bony orbital , ithambo le-maxillary elisezantsi kunye neliphakathi, kunye namathambo e-lacrimal kunye ne-ethmoid, enza udonga oluphakathi lomjelo we-orbital. Iiseli zomoya ze-ethmoid zibhityile kakhulu, kwaye zakha isakhiwo esaziwa njenge-lamina papyracea, esona sakhiwo sibutyebileyo kukhakhayi, kunye nelinye lawona mathambo aqhekeka kakhulu kwingozi yomzimba.
Udonga olusecaleni lwenziwa yinkqubo engaphambili ye-zygomatic nangaphezulu emva kwepleyiti ejikelezayo yephiko elikhulu le-sphenoid. Amathambo adibana kwi-zygomaticosphenoid suture. Udonga olusecaleni lolona donga lutyebileyo lwe-orbit, bobona bume buveziweyo, kulula ukuba udibane nabo basemngciphekweni wokuhlaselwa ngamandla.
Ukuqhekeka kodonga olusezantsi kwe-orbital yeyona nto iqhelekileyo ekuqhekekeni kwe-orbital blowout, ehlala ibangela iingxaki ezinje nge-enophthalmic invagination, i-ocular movement disorder, i-diplopia kunye ne-ocular displacement, echaphazela kakhulu umsebenzi kunye nembonakalo. Ukuqhekeka kwe-orbital fractures, utyando kufuneka lwenziwe ngokukhawuleza xa invagion ye-intraocular ingaphezulu kwe-2mm kwaye indawo yokuqhekeka inkulu njengoko iqinisekisiwe yi-CT. Ekulungisweni kokuqhekeka kwe-orbital, izinto eziqhelekileyo ezisetyenziswayo ziquka i-hydroxyapatite bone bone, i-polyethylene ye-polyethylene eyenziwe ngezinto zokwenziwa, i-hydroxyapatite complex and titanium materials Ukulungiswa kwezinto zokulungiswa kwe-orbital, izinto ezifanelekileyo zokumiliselwa kufuneka zibe nezi zinto zilandelayo: ukuhambelana okuhle kwebhayoloji, kulula ukuyila kwaye ibekwe kumacandelo okonakala eludongeni, ngokulula akwazi ukugcina imilo yenkxaso yemixholo ye-orbital ukuze kugcinwe indawo yesiqhelo yamehlo, inokutshintsha ukungabikho komxholo we-orbital kunye nokwandisa umthamo we-orbital cavity, ukuphucula umthamo we-CT ukuququzelela ukuqaphela emva kokusebenza. Kuba i-titanium mesh kulula ukuyila kwaye inolungiso olufanelekileyo, ayinalo uvakalelo, i-carcinogenesis kunye ne-teratogenicity ekunxibelelaneni nomzimba womntu, kwaye inokudityaniswa kakuhle nezicubu zethambo, i-epithelium kunye nezicubu ezinxibelelanayo, yiyo ke eyona nto ilungileyo yentsimbi kunye ne-biocompatibility .
Amacwecwe e-Orbital acwangcisiweyo ayilelwe kwidatha yokuvavanywa kwe-CT. La macwecwe anezixhobo zokufakelwa ezikufutshane ngokusondeleyo kobume bomhlaba bomgangatho we-orbital womntu kunye nodonga oluphakathi kwaye zenzelwe ukusetyenziswa kukhetho olukhethiweyo lwe-craniomaxillofacial trauma. Ubume obunemilo emithathu: Yenzelwe ukugoba kunye nokusika okunciphisa inani lexesha elifunekayo kwipleyiti yentsimbi. Imiphetho ipleyiti Contoured: Kuba lula ipleyiti ukufakwa ngokusebenzisa ukusikwa ulusu kunye uphazamiseko ngaphantsi phakathi kwipleyiti kunye ezingqonge ethambileyo ngeenxa zonke. Uyilo olwahlula-hlulwe: Ukulungiselela ubungakanani beplate ukujongana nobume be-orbital kunye nokugcina imida yeplate eneziphetho ezinemiphetho ebukhali. Indawo eqinileyo: Ukubuyisela imilo kumgangatho ongasemva we-orbital ukunceda ukugcina indawo efanelekileyo yeglobhu. izisombululo ezibanzi zokulungiswa komgangatho we-orbital kunye nokwakha ngokutsha.
Egqithileyo Isikali sokuzibamba esingu-2.0
Okulandelayo: maxillofacial trauma micro X ipleyiti
Ukutshixa iplati encinci ye-arc
I-orthognathic 0.8 genioplasty ipleyiti
Ukutshixa iplati encinci ye-90 ° L
maxillofacial trauma micro acr ipleyiti
i-anatomical titanium mesh-3D imilo yelifu
maxillofacial trauma mini 90 ° L ipleyiti